07 Dec, 2018 - 00:12	 2018-12-12T15:31:38+00:00 2018-12-07T00:01:28+00:00 0 Views
MAKADINI veKwayedza? Ndine makore 33 nevana 3 uye ndiri pamushonga. Ndinotsvagawo murume ari pachokwadi. Ndibatei pa0715 857 658 asi varume vevanhu kwete.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 26, ndinotsvagawo murume anoshanda, anogeza uye anowonekerawo. Ari pachokwadi, matsotsi kwete. Ngaandibate pa0779 949 747, maita basa.
Makadini veTishamwaridzane? Ndiri murume ari parwendo rwehupenyu kwemakore 36. Ndiri kutsvagawo shamwari yekufambidzana nayo parwendo urwu. Chakakosha munhu nerudo rwake kwete hupfumi hwake, izvo zvinozotevera. Kana pane ane pfungwa dzimwe chetezvo asingatarisire hupfumi, anoda zverudo zvimwe zvozotevera ndiye wandinoda. Nhare yangu 0712 774 011.
Ndiri mukomana ane makore 21 okuberekwa ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 19 zvichidzika asiri pamushonga. Andifarira ngaandibate pa0712 124 830.
Makasimba here veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 31 ndinotsvagawo mudzimai ane makore 22 kusvika 25 anoda zvekuroorwa. Ndinoshandira muBindura. Anondifarira ngaandibate pa0719 304 056.
Ndiri mudzimai ane makore 39 nemwana mumwe chete. Ndinorarama neutachiona uye ndiri pamushonga. Ndinotsvaga murume ave kuda zvekuroora asina mukadzi asingaratidze kurwara, anorarama neutachiona seni ari pamushonga. Ngaave ane makore 45 – 55. Andifarira ndibate pa0775 074 941.
Ndiri kutsvaga murume ane makore 45 – 55 anorarama neutachiona asingaratidze kurwara. Ini ndine mwana mumwe chete. Andifarira ndibate pa0775 074 941.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 23 nevana vaviri. Ndinotsvagawo murume ane makore kubva pa28. Ndodawo ane rudo uye anonzwisisa, ndinoita zvekutengesa. Ndiri muGweru, nhare yangu 0776 314 758.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi. Ndinoda anotya Mwari, ngaave ari pakati pemakore 18 kusvika 25. Ndatenda, nhare yangu 0776 135 863.
Tishamwaridzane makadi veKwayedza? Ndine makore 30, ndoda mukadzi ane makore 25 zvichidzika. Nhamba dzangu 0771 897 158.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 32 nevana 3, ndinodawo murume ane makore 40 zvichikwira. Ndiri muHarare, 3 andida ngatitaure pa0714 851 615. Ngaave ari serious, kutamba kwete.
Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi. Ndiri pamushonga uye ndine makore 25. Ndingafara kuwana wangu, nhare yangu 0782 052 579.
VeTishamwaridzane makadii? Ndiri mukadzi ane makore 44 nevana 3, ndotsvaga murume ane makore 48 kusvika 60. Ndiri HIV negative, ndoita basa remaoko. Ari pachokwadi anenge andifarira ndobatika pa0777 385 595.
Makadini zvenyu? Ini ndiri murume ane makore 30 nevana 2 ndinotsvaga mukadzi ane makore 20 kusvika 28 ane mwana 1 kana asina. Vanoda ndibatei pa0772 407604.
Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1, HIV negative uye ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 18 – 28 ane mwana kana asina. Ngaave asina chirwere ndapota. Ndinoda munhu ari serious anodawo zvekumusha. Ini ndinogara muHarare, nhamba dzangu 0713 232 574 makasununguka kufona chero nguva.
Makadiiko weKwayedza? Ndapota ndishambadzei ndanyorera kakawanda mubepa. Ndiri mukomana ane makore 28, handisati ndamboroora uye ndiri kutsvaga musikana ave kuda zvemusha akarongekawo. Ngaave asina mwana uye anofarirawo nyaya yekuongororwa ropa. Zvakawanda tinokurukurirana pa0712 527 303 ndidzo nhare dzangu.
Ndiri murume ane makore 40, ndotsvaga musikana kana mukadzi wekuroora. Ngaave ane makore 32 zvichidzika anoda musha uye ane mwana 1 kana asina. Ari HIV negative ngaandibate pa 0774 257 671.
Ini ndiri mukadzi ane makore 26 nevana vangu vaviri. Ndodawo murume ari serious ari kuda kuroora asina mukadzi uye asina chirwere. Ini handina chirwere, vanoda ndibatei pa0785 258 667.
Ndotsvakawo mukadzi wekufambidzana naye asina chirwere. Ngaave anozvishandira uye anogara Chiredzi kana Triangle. Vasiri serious musafona, nhare yangu 0778 265 607.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana ane makore 23 zvichidzika. Ngave anoshanda muHurumende. Anondibata pa0777 315 189.
Ndiri murume ane makore 38 nemwana 1. Ndodawo shamwarikadzi ine makore 35 – 39 yakapedza kubereka. Nhare yangu 0772 462 701.
Ndinodawo mukadzi ane makore 21 – 38 ari negative wekufara naye tochengetana. Ndine makore 43, nhare yangu 0775 147 535.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 34. Ndinotsvaga mukadzi wekuwadzana naye, anobva kuManicaland ane makore 20 – 27. Ndinoshandira Hurumende, nhare yangu 0713 186 153.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri musikana ane makore 20, HIV positive uye ndinotsvagawo mukomana ari pachokwadi. Nhare yangu 0771 216 584.
Ndodawo musikana ane makore 20 – 29 asina mwana, handina kumboroora. Ndine makore 34 uye ndinoda anoenda kuchechi. Nhamba dzangu 0785 526 477, ndinoda kunyanya Chinhoyi area.
Ndiri musikana ane makore 20, ndodawo murume ane makore 23. Nhare yangu 0779 188 126.
Ndiri kutsvaga wekufambidzana naye, ndine makore 32 nevana 3. Ndoda murume ane makore 36 – 45 asiri pamushonga. Andida ndibate pa0717 502 674.
Ndiri murume ane makore 35 nevana 2, ndogara muHarare uye ndiri HIV positive. Ndoshanda, ndoda mukadzi ane mwana wake ane makore 24 – 32 anoshanda, anonamata. Nhare yangu 0775 126 879.
Shambadzayiwo tsamba yangu veduwee. Ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 23. Andifarira ndibate pa0784 578 231. From Carlo Roggie Chiks.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 27 nevana 2, ndiri kutsvakawo murume anoda kuroora ari pachokwadi. Ndinobatika pa0776 619 472.
Hie dateline. I am a single mother aged 19 looking for a single couple between 23 – 28 years. Contact 0777 887 025.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 39 ari kutsvakawo mukadzi anoda zvemusha kubva pamakore 25 – 35. Andida ndibate pa0772 512 752.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 39 ndanzwa nekunyorera. Ndinotsvaka mukadzi ane makore 25 – 35. Andida ndibate pa0772 512 752, ari pachokwadi.
Ndiri mukomana ane makore 21, ndiri kutsvaga musikana penpal ane makore 18 – 20. Ndinoshanda ndiri builder, andida nhare iyo 0777 586 924.
Ndiri mukadzi ane makore 41 nevana 3, ndinotsvagawo murume ane makore 48 kusvika 60 asiri pamushonga. Ari kuManicaland andifarira ndibate pa0782 169 445.
Makadii henyu? Ndiri mukadzi ane makore 38 ndinotsvaga murume anoda zvemba asiri pamushonga anoda kunamata. Ndine mwana 1, nhare yangu 0776 343 277.
Makadii veKwayedza? Ndinokutenda ndakazomuwana wangu wandaida saka vaifona pa0713 595 614 chiregedzai zvenyu.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 19 kusvika 25 ane rudo, anonamata uye asiri pamushonga nekuti ini ndiri HIV negative. Handina kubvira ndaroora, anoda anondibata pa0771 737 176.
Makadii? Ini ndiri murume ane makore 30 uye ndiri HIV+. Ndinotsvaga musikana kana mukadzi ane mwana mumwe ane makore 19 – 28 ane chaanoitawo muupenyu. Ngaave anotya Mwari akatendeka ane mazirudo, achigara muHarare asinganetse kuona. Ndinoda ava kuda kupinda mumba, ari pachokwadi andifarira anondibata pa0772 704 345.
Makadii veKwayedza? Ndodawo mukadzi akasimba anoshanda anoda zvemba. Ini ndoshanda, ngandibate pa0774 250 910.
VeKwayedza ndingafara mukandishambadzawo. Ndiri mukadzi ane makore 36, ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora. Ngaave anoshanda asinganwi doro kana kuputa. Ari HIV positive anondibata pa0776 991 621. Ndogara kuChimanimani.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 38, ndinodawo shamwarirume iri pachokwadi ine makore 45 – 50. Anondibata pa0775 182 966, zvakawanda tinozotaura.
Makadini veKwayedza? Ndinotsvakawo musikana akavimbika asati ashinha nemurume ane makore 23 zvichidzika. Andifarira tumira sms pa0714 438 229.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ari pakutsvagawo murume ari pachokwadi anoda vana vangu. Ini ndine makore 22, ndinodawo ane makore 28 kusvika 39 asiri pamushonga. Nhare yangu 0715 380 359.
Ndiri murume ane makore 48 ndotsvagawo mukadzi ane makore 38 kusvika 47. l need a teacher. Ndiri muHarare. Nhare yangu 0718 805 563.
Makadini? Ini ndiri murume ane makore 30 okuberekwa nemwana mumwe. Ndinotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye ane mwana wakewo kana asina. Ngaave ari pakati pemakore 19 kusvika 25. Kunyanya ari kuMarondera, ngaandibate pa0713 215 029.